Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Manakaiky ny robots 1 tapitrisa izao any amin'ny orinasa Shina
Ny tatitra vaovao World Robotics 2021 Industrial Robots natolotry ny International Federation of Robotics (IFR) dia mampiseho firaketana robot indostrialy 943,000 miasa any amin'ny orinasa Shina ankehitriny - fitomboana 21%. Nitombo be ny varotra robots vaovao tamin'ny 168,000 teo ho eo nalefa tamin'ny 2020. Nitombo 20% izany raha oharina tamin'ny 2019 ary ny sanda ambony indrindra voarakitra ho an'ny firenena tokana.
"Ny toe-karena any Amerika Avaratra, Azia ary Eropa dia tsy niaina ny ambany Covid-19 tamin'ny fotoana iray," hoy i Milton Guerry, filohan'ny Federasiona Iraisam-pirenena momba ny Robotika. "Nanomboka nitombo ny fidiran'ny kaomandy sy ny famokarana ao amin'ny indostrian'ny famokarana sinoa tamin'ny telovolana faharoan'ny 2020. Nanomboka niverina indray ny toekaren'i Amerika Avaratra tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2020, ary nanaraka izany i Eropa taty aoriana kely."
Ny mpanamboatra robot sinoa dia nikarakara ny tsena anatiny indrindra, izay nitazona ny tsenan'ny 27% tamin'ny taona 2020 (45,000 unit). Ity ampahany ity dia tsy miova nandritra ny 8 taona lasa. Tamin'ny taona 2020, ny fametrahana robots vahiny - anisan'izany ireo singa vokarin'ny mpamatsy tsy sinoa any Shina - dia nitombo 24% ka hatramin'ny 123,000 tamin'ny taona 2020 miaraka amin'ny ampahany amin'ny tsena 73%.
Ny fametrahana robot eran-tany dia antenaina hihemotra mafy ary hitombo 13% ka hatramin'ny 435,000 unit amin'ny 2021, noho izany dia nihoatra ny haavon'ny firaketana tamin'ny taona 2018. Ny fametrahana any Amerika Avaratra dia antenaina hiakatra 17% ka hatramin'ny efa ho 43,000. Ny fametrahana any Eropa dia antenaina hitombo 8% ka hatramin'ny efa ho 73,000. Ny fametrahana robot any Azia dia andrasana hihoatra ny marika 300,000 ary manampy 15% amin'ny vokatra tamin'ny taona teo aloha.